मन्त्रीकै श्रीमतिको फेसबुक एकाउण्ट बनाएर च्याट गर्दै यसरी ठगी गर्छन् यी पत्रकार! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मन्त्रीकै श्रीमतिको फेसबुक एकाउण्ट बनाएर च्याट गर्दै यसरी ठगी गर्छन् यी पत्रकार!
मन्त्रीकै श्रीमतिको फेसबुक एकाउण्ट बनाएर च्याट गर्दै यसरी ठगी गर्छन् यी पत्रकार!
admin October 12, 2020 October 12, 2020 समाचार	0
काठमाण्डौं । जुम्ला स्थायी घर भएका पसल रोकायका चिनारी धेरै छन् । उनी कसैलाई पत्रकार, कसैलाई राजनितिज्ञ, कसैलाई ठेकेदार त कतै समाजसेवीको परिचय दिन्छन् । तर उनको बास्तविक धन्धा भने फरक छ । उनको धन्धा भनेको बिभिन्न बहानामा मानिसहरुलाई ठग्नु हो । रोकायले सरकारी कर्मचारीदेखी मन्त्रीका श्रीमतीलाई समेत ठगी गरेको खुलेको छ । हाल प्रहरीले पक्राउ गरेका रोकायको केही समय अघि चर्चित एक काण्डमा समेत नाम जोडिएको छ ।
उनले नर्सिङ पढ्ने युवतीलाई परीक्षा पास गराइदिने भन्दै रकम लिएको आरोप छ । यस सम्बन्धमा उनीविरुद्ध सुर्खेतमा ठगी अभियोगमा उजुरी समेत दर्ता भइसकेको छ । पसलले आफ्नो बैंक खातामा २ करोड रुपैयाँ समेत भएको दावी गरेका छन् ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईकी श्रीमती तथा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको रजिस्ट्रार विन्दा घिमिरेले पैसा मागेर च्याट गरेको कुरा त्यसताका बाहिरीएको थियो । बिद्यार्थीलाई दर्ता प्रमाणपत्र लाइसेन्स परीक्षा पास गराइदिने भन्दै काउन्सिल सदस्य जीता बरालले तीन लाख रुपैयाँ मागेको फेसबुक कुराकानी समेत सार्वजनिक भएको थियो ।
पछिल्लो घटना क्रमले यी सबै कर्तुत रोकायले गरेको अनुमान गर्न सकिने प्रशस्त आधार रहेको प्रहरीले बताएको छ । ती घटनामा पसलले नै नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर गरेको देखिएको छ । ‘यो घटनामा पनि उसैको नाम जोडिएको छ । थप अनुसन्धान भइरहेको छ’, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
पत्रकारको भेषमा उनले कर्णाली आवाजडटकम र कर्णाली एचडी युट्युव च्यानल मार्फत् पनि पैसाको लेनदेन र ठगी गरेको प्रहरीको दावी गरेको छ। उनले च रि त्र ह त्या गर्ने फेसबुकमा नक्कली आइडी खोलेर दुई जनाको नक्कली च्याट समेत गरेको तथा कसैको अ श्लि ल फोटो समेत हा ल्ने ध म्की दिने गरेको खुलेको हो ।
साउदीबाट श्रीमानको चित्कार! बच्चा छोडेर श्रीमति पैसा लिएर फरार.. (हेर्नुहोस भिडियो)
महानायक राजेश हमाल एकाएक यसरी मुछिए विवादमा!
एयरपोर्टदेखि हायातसम्म एनआरएनले देखाएको तमासा! नेपालीलाई सभ्यता सिकाउने एनआरएन आफैं कति सभ्य ?